सेयर र जुवा | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर र जुवा
केही समय अघिसम्म पलेँटी कसेर बसेको शेरेले अहिले घुँडा मारिरहेको छ । करिब तीन घन्टाभन्दा बढी भयो ऊ यताउता सरेको छैन । उसका खुम्च्याएका घुँडा उत्तरतिर फर्केका छन् भने खुट्टा र पछाडिको भाग दक्षिण । दायाँ बायाँ पनि त्यति नेहेरी ऊ एकोहोरो अगाडि हेरिरहेको छ ।
आइतबार पनि बिदा भएकाले यसपटक शनिबारसहित लामै बिदा छ । बिदाको उपयोग गर्न शेरे शनिबार साथीभाइसँग भेला हुन्छ । कहिलेकाहीँ अलिक लामो बिदा हुँदा र चाडवाडका बेला साथीभाइसँग बसेर तास खेल्नु उसको आदत भइसकेको छ । ताससँगै केही बोतल चुस्की लाउन यो समूह बिर्संदैन । सरकारले रक्सीको कर बढाए पनि पिउने रहर यो समूहमा घटेको छैन । चुस्कीका लागि केही बोतल, केही काँक्रो, गाँजर, मुला अनि भुटेको चिकेनसहितको पूर्वतयारीमा यो शनिबार शेरेसहित ५ जना म्यारिजमा जमेका छन् । तास खेल्ने बेला दायाँ बायाँ केही दर्शकको कमी कहिल्यै हुँदैन ।
तास खेल्न बसेको पनि सात घन्टा बितिसकेको छ । ‘तास खेल्दा खेल्दै समय बितेको पत्तै नहुने,’ सेरेको दायाँतिर बसेको साथीले भन्छ । अर्कोले थप्यो, ‘तास भनेको यस्तै हो ।’ एउटाको पालो । अर्कोको पालो । माल । अंक । पैसा । लेनदेन । हार जित ।
यसबीचमा पैसा पनि निकै यताउता भइसकेको छ । कसैका पर्सका पैसा सकिइसकेका छन् । कसैका पर्समा अलिक बढेका छन् । कसैका पर्समा अलि अलि बाँकी छन् । समय समयमा उनीहरुले गर्ने गफबाट यो प्रस्ट हुन्छ ।
दुइटा घुँडामाथिको भागले शेरेले पिसाब नली राम्रैसँग च्यापेर बसेको स्पष्टै भान हुन्छ । हेर्दा लाग्छ, पिसाबले उसलाई निकै च्यापेको छ । साथीहरु धरै पटक शौचालय गए पनि शेरे उठेको छैन । खिइदा पैसाका अंक र पर्न छाडेको तासले ऊ उठ्न सकेको छैन । उसको अगाडि हुने नोटका अंक साना हुँदै गएका छन् । तर, कतिपयका अगाडि भने नोटका अंक बढेका छन् ।
शेरे तासमा एकोहोरिएको छ । छेउको प्लेटमा मासुका केही टुक्रा छन् । र पनि उसले टिपेको छैन । मासुका बाँकी टुक्रा सुकिसकेको देखिन्छ । काँक्रो, गाँजर र मुलाका टुक्रा प्रायः सकिसकेका छन् । अरुले समय समयमा रक्सीको चुस्की लिए पनि शेरेले लिएको छैन तर उसको गिलासमा रक्सी केही अझै बाँकी छ । त्यसमा उसको ध्यान खासै गएको देखिँदैन । तर साथीहरु बेला बेला उसलाई चुस्की लिने कुरा सम्झाउन भने बिर्संदैनन् ।
केही साथी अगाडीदेखि नै ‘उठौं’ भनिरहेका छन् । सायद उनीहरुसँग पैसाका अंक बढेको हुनुपर्छ । तर, शेरे ‘खेलौं’ भनिरहेको छ । ऊ अझै खेल्न चाहन्छ किनकि उसले तासमा केही हजार पैसा हारेको छ । रातको १२ बजिसकेको छ । ऊ अझै खेल्न चाहन्छ । ऊ जसरी भए पनि साँवा उठाउन चाहन्छ । त्यसैले समय समयमा भनिरहेको हुन्छ, साँवा त उठाउनुपर्‍यो नि ! कि कसो साथि हो ?
तास राम्रै पर्ने आशमा उसले यो पटक सबै तास एकै पटक उठायो । तर यसपटक पनि उसलाई तास परेन । खेल एक राउन्ड नपुग्दै अर्कैले बाजी मार्‍यो । उसले ठुलै रकम तिर्नुपर्ने भयो । पैसाका अंक अझ सुकेर गए । ऊ अझै तिघ्राले मुत्र नली च्यापिरहेको छ । र, भन्दै छ अझै एक दुई राउन्ड त खेल्नैपर्ने भयो । पैसा त उठाउनुपर्‍यो नि हैन ? यसै समयमा अर्को भनिरहेको छ, ‘हुन्छ म त खेलिदिन्छु अलि अलि आएकै छ क्यार । हारे त्यहि जितेको जाने त हो नि !’
जब मानिस तास वा जुवा खेल्छन् । सबैले जित्ने भन्ने हुँदैन । कसैले जितिरहेको हुन्छ । कसैले हारिरहेको हुन्छ । एकातर्फको पैसा अर्कोतर्फ सरिरहेको हुन्छ । तर, आश सबैको जित्ने नै हुन्छ । यहाँ बढो अचम्म छ । हार्ने साँवा उकास्नका लागि अझ खेल्न खोज्छ । जित्ने जितेको पैसाले मजा गर्न अझ खेल्न तम्सिन्छ । जित्ने र हार्ने वा गुमाउने र कमाउने दुवै खेल्न छाड्दैनन् । यही भएर नै जुवा खेल्नेहरु हारे पनि खेलाउनेहरु कहिल्यै हार्दैनन् । क्यासिनो जानेहरु हारे पनि चलाउनेहरु कहिल्यै हार्दैनन् । जसले हार्नेलाई पनि तान्छ । जित्नेलाई पनि तान्छ । क्यासिनो र क्रुज उपन्यासका लेखिका कारा ब्रेयुआ लेख्छिन्, ‘क्यासिनोमा पैसा जितेर हिँड्न गाह्रो छ र त्योभन्दा गाह्रत्र गुमाइरहेको अवस्थामा टेबल छोडेर हिँड्नलाई छ ।’
तर, सेयर बजार ? जित्ने (कमाउने) लगानी गर्न खोज्छ । गुमाउने बजारबाट निस्कन (भाग्न) खोज्छ । सेयर बजार, जहाँ गुमाउनेलाई बजारले तान्न सक्दैन । जब जब बजार घट्दै जान्छ, बजारका सहभागी घट्दै जान्छन् । नयाँ तर्किंदै जान्छन् । यही भएर घट्दो बजारमा दिनप्रतिदिन कारोबार घट्दै गइरहेको हुन्छ । तर, जुवामा कमाउने र गुमाउने दुवैलाई बजारले तानिरहेको हुन्छ । यसकारण जुवा खेलाउनेहरु संसारमा कहिल्यै हार्दैनन् ।
प्रकाशित समय १४:१७ बजे
पछिल्लाे - इन्द्रजात्रा हेर्न ४८ विदेशी जनप्रतिनिधि आउने
अघिल्लाे - बैंकमा महिलाको पहुँच बढ्दो